Mona Sahlin oo dembi lagu tuhmayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mona Sahlin Foto: Ulf Palm/TT
Mona Sahlin oo dembi lagu tuhmayo
Publicerat onsdag 21 september 2016 kl 16.19
Mona sahlin oo dhawaan iska casishay xil ay ka heysay hey’adda ka hortagga xagjirnimada ayaa iyada iyo waardiyaheeda qaaska ah lagu tuhmayaa dembi, sida ay weriyeen wargeysyada Expressen iyo Aftonbladet.
Mona sahlin dembiga lagu tuhmayo ayaa ah marqaatifur been abuur ah kadib markii ay waardiyaheeda qaaska ah u qortay dokumenti cadeyn ah oo been abuur ah. Wardiyaheeda qaaska ah asna waxaa lagu tuhmayaa dembi ah qoraal been abuur ah.
Sahlin ayaa gu’gi iska casishay xilka iskuduwaha qaran ee ka hortagga xagjirnimada kadib markii wargeyska Expressen fashilay in ay wargad cadeyn ah oo been abuur ah u qortay waadiyaheeda qaaska ah. Warqadd waxay cadeyneysay in wardiyaha Mona sahlin ay soo gasho mushaar ka badan middka uu ka qaato hey'adda ka hortagga xagjirnimada.
Mona Sahlin waxay horey sidoo kale u ahaan jirtay hoggaamiyaha xisbga Socialdemokraterna, xilal wasiirnimo oo kaloduwan ayey dalka horey uga soo qabatay.